Dalkan Iswiidhan qof kastaba waxa uu xaq uu leeyahay in uu dhex mushaaxo deegaanka iyo kaymaha. Waxa lagu magacaabaa xuquuqdan “allemansrätten”. Xuquuqdani waxay dhammaanteen ina siinaysaa fursadaha aynu ku dhex mari karno deegaanka. Laakiin waxa mulkiilayaasha dhulka iyo dadweynaha kaleba inaga saaran mas’uuliyad. Taas oo ah in aan waxna la jajabin cidna la rabshin.
Wakaaladda daryeelka deegaanku waxa ay soo sartay macluumaad ku saabsan xuquuqda deegaanka, isticmaalka huudhiga/laashka iyo gurashada midhaha oo ku qoran af-iswiidhish fudud iyo luqado kale oo kala duwan.
Wixii macluumaad dheeraad ah u doono: naturvårdsverket.se